Mangataka amin’ny Sekolin’ny Lalàna ao Harvard i Antigua & Barbuda mba hanome fanonerana avy amin’ny tombontsoa azony tamin’ny fanandevozana · Global Voices teny Malagasy
Mangataka amin'ny Sekolin'ny Lalàna ao Harvard i Antigua & Barbuda mba hanome fanonerana avy amin'ny tombontsoa azony tamin'ny fanandevozana
Hahitana fanonerana ve ny "dingana fanampiny' horaisin'i Harvard noho ny fanandevozana?
Voadika ny 23 Novambra 2019 5:58 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, English
Ny trano famakiam-boky ao amin'ny Sekolin'ny Lalàna Harvard, noravahana hanombohana taom-pianarana tamin'ny taona 2011, raha mbola entina hanehoana ny sekoly ny tombokasen'i Royall mampiady hevitra – ampinga iray misy amboaram-barimbazaha telo, anehoana ny fifandraisan'ny mpamatsy vola amin'ny fanandevozana . Saripikan'i NKCPhoto, CC BY-NC-ND 2.0.
Telo volana taorian'ny nanasoniavana ny fifanarahana fanonerana ara-tantara teo amin'ny Oniversiten'i Glasgow sy ny Oniversiten'i Antilles, nanoratra taratasy tany amin'ny filohan'ny Oniversiten'i Harvard, Lawrence Bacow ny praiminisitr'i Antigua sy Barbuda, Gaston Browne, mangataka amin'ny oniversite ligy Ivy mba hamita ny andraikiny ary mandoa vola fanonerana ho an'ny fireneny noho ny fifandraisana mana-tantaran'ny sekoly amin'ny fivarotana andevo transatlantika sy fahazoana tombontsoa tamin'izany.
Na dia ny fifanarahan'ny Oniversiten'i Glasgow £20 tapitrisa ( 24.308.500 dolara Amerikana) aza no fihetsika voalohany tamin'ny fanonerana ny fianakavian'ireo olona nandevozin'ny Britanika nanomboka tamin'ny nanambarana ny fahaleovantena tamin'ny taona 1838, sy hita fa fihetsika an'ohatra ho an'ny faritra Karaiba rehetra, nahatsapa ny praiminisitra Browne fa tokony omena an'i Antigua sy Barbuda indrindra ny fanonerana noho ny zava-misy fa nanome vola ho an'i Harvard mba hananganana ny sampam-pampianarana lalàna i Isaac Royall Jr., mpivarotra andevo Amerikanina sady manantany goavana izay niasa tany Antigua, ary nitarika ny famoronana ny Sekoly Lalàna Harvard tamin'ny taona 1817 taty aoriana.
Ankoatra izany, ho fankalazana ny faha-telonjato taonan'ny anjerimanontolo tamin'ny taona 1936, namadika ny ampingan'i Royall ho tombo-katse ofisialin'ny sekolin'ny Lalàna ao Harvard. Nanaporofo ny fisian'ny fanapahan-kevitra mampiady hevitra be izany, noho ny zava-misy goavana fa nodoran'ny governemanta mpanjanaka tao Antigua tamin'izany fotoana izany tamin'ny taona 1736 ireo andevo 77 izay voaheloka ho nikomy. Tamin'ny taona 2016, nanao fihetsiketsehana ireo mpianatra ao Harvard mba hanaisotra ilay marika (ampinga), niantso azy io ho “fankalazana sy fahatsiarovana ho an'ny iray amin'ireo tompon'ny andevo lehibe indrindra sy mahery setra indrindra tao Massachusetts.”
Tsy nisalasala ny lahatsoratra fanehoan-kevitra iray tao amin'ny The Harvard Crimson, gazety tantanan'ny mpianatra niantso ny fambolena siramamy ataon'ny fianakaviana Royall ao Antigua ho “iray amin'ireo fiarovana mafy indrindra amin'ny varotra andevo”:
Tamin'ny tapaky ny taona 1730, nahatonga ny tsy fahampian-drano tao amin'ny nosy ireo andiana loza voajanahary, toy ny fihanaky ny areti-mandringana sy ny haintany. […]
Niharan'ny fahadisoam-panantenana nateraky ny mosary sy ny hetaheta, nametraka paika hikomy ireo olona be herim-po ireo mba hiady ho an'ny fahafahan'izy ireo tamin'ny taona 1736. Nanampy tamin'ny fandringanana izany paikara izany anefa ny fianakaviana Royall nampian'ny governemanta fotsy hoditra sy tompon'ny tany […] ka nandoro olombelona 77 tao anaty ala , anisan'izany i Hector, andevon'ny fianakaviana Royall. Olona enina no nahantona notapahan-doha ary olona dimy no notapatapahana tamin'ny kodiarana.
Matetika fafana ny horohoro momba ny varotra andevo rehefa mipoitra ny resaka momba ny fanonerana, saingy tsy toy izany kosa ny lahatsoratra:
Tsy manalavitra antsika amin'ny tantara ny fanovana ny tombo-kase. Mampiseho izany fa tena takatsika izany tantara izany ary takatsika ny dika lalina sy ratsy momba ny fanavakavaham-bolonkoditra, ny fanandevozana, ny fampijaliana sy ny famonoana faobe. […]
Ny marika dia fanehoana hoe iza isika amin'ny maha-fiarahamonina antsika, ary iza isika ankehitriny izay mifamatotra tanteraka amin'ny tantarantsika. Mandoto ny tantarantsika momba ny fanandevozana ireo marika izay mahatsiaro ny olona toa an'i Royall. Raha tsy miatrika ny tantarany ny Sekolin'ny Lalàna, dia manampy amin'ny fitohizan'ny kolontsain'ny fanandevozana sy ny famoretana izy.
Nesorina ihany ilay tombo-kase taty aoriana, ary nanambara ny fahavononan'ny oniversite hatrany hanaiky ny fifamatorany amin'ny fanandevozana, zava-misy izay nolazain'ny filoha ankehitriny tamin'ny valinteniny ho an'i Browne, ny praiminisitra teo aloha ao Harvard, Drew Faust, ary nampiany hoe:
Vonona i Harvard hanao dingana fanampiny hitrandrahana ny fifandraisana ara-tantaran'ity ivon-toerana ity amin'ny fanandevozana sy ireo fanontaniana ara-moraly sarotra izay mipetraka rehefa miatrika ireo tsy rariny teo aloha sy ny lovany. Vonona ihany koa i Harvard hiara-hiasa amin'ireo andrim-pampianarana hafa mba hanadihady ny fanandevozana sy ny lova navelany.
Amin'izao fotoana izao dia tsy mazava ireo fepetra fanampiny ireo, saingy mangataka fanonerana ho an'ny fampianarana – indrindra ny Oniversiten'i Antilles ao amin'ny Nosy Dimy ny praiminisitra Browne, amin'ireo taratasy teo aloha nalefan'i masoivohon'i Antigua sy Barbuda ho an'i Etazonia, Andriamatoa Ronald Sanders:
Nanatintrantintra ny ambasadaoro Sanders fa […] ny laza ananan'i Harvard manerantany dia mifamatotra amin'ny lova maizina momba ireo andevo Antigua an'i Royall izay namoy ny ainy tamin'ny fampijaliana, sy tsy nahazo fanonerana ho an'ny fiainan'izy ireo tamin'ny fanandevozana sy ny fahafatesan'izy ireo tamin'ny habibiana. Amin'izany toe-javatra izany, dia nitady ezaka mafy avy amin'ny Harvard izy mba hanome onitra ho an'ny mponin'i Antigua tamin'ny tombontsoa azon'ny Harvard tamin'ny alàlan'ny havan'izy ireo.
Nanolo-kevitra i Brown mba hihaona amin'ny governemantan'i Antigua sy Barbuda ny solontenan'ny oniversite mba hiresaka momba io olana io, saingy hatramin'izao dia mbola tsy nisy ny fanamafisana raha mikasa hanaraka ny ohatra nasehon'ny Oniversiten'i Glasgow i Harvard na tsia.
Raha ny marina, nilaza ny tonian-dahatsoratra Harvard Crimson hoe:
Na dia ekenay aza fa tokony hikasa ny hanonitra ny tantarany maharikoriko momba ny fanandevozana i Harvard, dia tsy mino izahay fa ny fanohizana ny fanonerana manokana ny Antiguan no fomba tena mahomby indrindra. Amin'ny maha oniversite manana rohy amin'ny tsy rariny ara-tantara marobe, tsy tsara ho an'i Harvard ny manohy ny trosa amin'ny fahamendrehana an'ohatra. Fa tokony hiady amin'ireo tsy rariny manjaka sy miverimberina miaraka amin'ny vahaolana lehibe izy ireo. Manakely ireo zava-miavaka amin'izany tsy rariny izany ny fanovana tena ilaina ao Harvard.
Na izany aza, efa nisy ny fialohavan-dalana nifanaovana tamin'ny Oniversiten'i Glasgow nandray ny moraly ambony momba ny fanonerana, ary toa manaiky ny fiarahamonina Karaiba fa tokony hitarika ny raharaha amin'ity lohahevitra ity i Harvard.
Araka ny tsikaritr’ilay mpampiasa Facebook Alfanso Jerry Simon hoe:
Tsy manao na inona na inona hanitsiana ity tsy rariny goavana ity ny fiaikena fa nandray tombontsoa lehibe tamin'ny asan'ny andevo tao Antigua ny Harvard ary nanao fanovana an'ohatra vitsivitsy tamin'ny takelaka na ny ampinga. Mila manome fanonerana marina sy azo tsapain-tanana ho an'i Antigua sy Barbuda i Harvard ankehitriny. Azon'izy ireo atomboka amin'ny alàlan'ny fanampiana goavana sy azo refesina ao amin'ny oniversiten'i Antilles miorina ao Antigua izany.
13 ora izayHaiti
4 herinandro izayTrinite sy Tobago